२०० करोड खर्च गरेर विवाह– २ सय हेलिकप्टर र सय जना पण्डित बुक, ४०० प्रकारको खाना ! « गोर्खाली खबर डटकम
२०७७ असार १२ गते शुक्रवार प्रकाशित
भारतको उत्तराखण्डमा एक यस्तो राजकीय विवाह हुनेभएको छ जसबारे थाहा पाउनुभयो भने तपाई आश्चर्यमा पर्नुहुन्छ ।
यो विवाहका लागि २ सय हेलिकोप्टर र १०० जना पण्डित बुक गरिएको छ । विवाहको लागि बनाइएको निमन्त्रणा कार्डपनि अनौठो खालको छ । यसमा विवाहको जानकारी भएको छ पाना छ । जुन चाँदीले बनेको छ । यतिमात्र होइन विवाहमा बलिउडका हस्तीहरुपनि हुनेछन् ।
यति थाहा पाइसकेपछि तपाईंहरुलाई कसको विवाह होला भन्ने खुलदुली चल्यो होला ?
यो विवाह भारत सहारनपुरको एनआरआइ गुप्ता परिवारका सदस्यको हो । अजय र अतुल गुप्ताका छोरा सूर्यकान्त र शशांकको विवाह क्रमश २० र २२ जुनमा तय भएको छ । विवाहको कार्यक्रम औलीमा १८ देखि २२ जुनको बीचमा हुनेछ ।
सूर्यकान्तको विवाह हिरा व्यापारी सुरेश सिंघलकी छोरी कृतिका सिंघलसँग र शशांकको विवाह दुबइका व्यापारी विशाल जालनकी छोरी शिवांगीसँग हुन लागेको हो ।
भारतीय सञ्चारमाध्यमहरुका अनुसार अजय गुप्ताले छोराको विवाह कार्यक्रम इटलीमा गर्न चाहेका थिए तर सरकारको पहलमा उनीहरुले विवाह भारतमा नै गर्ने योजना बनाएका हुन् । यो विवाहमा २०० करोड भारतीय रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ ।
विवाहको लागि बनाइएको निमन्त्रणा कार्ड एक डिव्वामा बनाइको छ । जसको तौल ४.५ किलोको रहेको छ ।
विवाह कार्यक्रममा बलिउडका हस्तीहरु पनि जानेछन् र आफ्नो प्रस्तुती दिनेछन् । जहाँ कटरिना कैफ, सिदार्थ मल्होत्रा, शाहिद कपूरका अलावा कैलाश खेर, शंकर अहसान लाय, विशाख शेखरको पनि उपस्थिति हुनेछ ।
विवाहमा स्वदेशी मात्र नभएर विदेशी पाहुना पनि पुग्छन् । उनीहरुको लागि २०० वटा हेलिकोप्टर पनि बुक गरिएको छ । हेलिकोप्टरले दिल्ली र देहरादुनमा उडान भर्ने छ । विवाहमा आएकाहरुलाई हिमालय पनि घुमाउने योजना रहेको भारतीय सञ्चारमाध्यमहरुले जनाएका छन् ।
विवाहपछि पाहुनाहरुलाई बद्रीनाथ लैजाने कार्यक्रम तय भएको छ । यसका साथै पाहुनाका लागि लगभग ४०० प्रकारको अलग अलग खानाको व्यवस्था गरिएको छ ।
आफु सुत्ने ओछ्यान वरिपरि भुलेर पनि नराख्नुस यस्ता सामाग्रीहरु, हुन्छ अशुभ
हाँस्दै रमाउँदै घर जाने बेलामा रातो बाकासमा ला,स बनेर फर्किए उनी – सबैलाई रु,वा,उ,ने कथा